देउवालाई रिस किन उठ्छ ? - परिहास - नेपाल
नेपाली कांग्रेस समर्थित नेविसंघले बूढाखाडा नेताहरुलाई संघको पदाधिकारी बनाएकामा विरोध जनाएको छ । विद्यार्थी संघमा बूढाहरु किन ?
अहिले नेविसंघ कार्यकर्ताको माग नै यही रहेको छ । नेविसंघले यस्तो माग तेर्स्याएपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने अत्यन्तै रिसाए । टेलिभिजनमा प्रसारणै गर्न नमिल्नेसम्मको शब्द प्रयोग गरी कार्यकर्तालाई गाली गरे । त्यो स्वाभाविकै हो । किन स्वाभाविक भने विद्यार्थी संघ भन्दैमा त्यहाँ बूढाहरु राख्नै हुँदैन भन्ने केही छ ?
हाम्रो त भनाइ नै छ, विद्या आर्जन गर्न उमेरले छेक्दैन । जो विद्या आर्जन गर्छन्, ती विद्यार्थी हुन् । अहिले पनि हेर्नुस्, ६५ वर्ष उमेर पुगेका बूढा विद्यार्थी नातिनातिनासँग एसईई परीक्षा दिन आइरहेका छन् । विद्यार्थी संघ भनेपछि उमेर जतिसुकै होस्, विद्यार्थीलाई सदस्य हुने अधिकार दिनैपर्छ ।
पोहोर साल हेर्नुस्, नायिका करिश्मा मानन्धर र सांसद शान्ता चौधरीले एसईई पास गरे । अहिले उनीहरु प्लस टू पढिरहेका छन् । भोलि करिश्माले नेविसंघको सदस्यता मागिन् भने दिन्न भन्न पाइन्छ ? अब यसरी करिश्मालाई समेत सदस्यता दिनबाट रोक्ने खालको माग तेर्स्याएपछि देउवालाई रिस उठ्दैन ?
प्रकाशित: कार्तिक २४, २०७६